Injiinar Taakkalaan moodeela Baasoota rabsa meeshalee socho’aaf qophaa’aan dawwatan – Fana Broadcasting Corporate
Injiinar Taakkalaan moodeela Baasoota rabsa meeshalee socho’aaf qophaa’aan dawwatan
Finfinnee, Sadaasa 9, 2012 (FBC) – Itti aanaan Kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaan Baasota tajaajila laachuu dhaabanii fi moodeela Baasoota rabsa meeshalee socho’aaf akka oolaaniif qophaa’aan dawwatan.
Baasoonni dhaabbata Awutoobisii magaalaa yeroo dheeraaf tajaajila laachaa turuun koolleejjoota teeknikaa fi ogummaa magaalaa finfinneetti haaroomsii fi suphaan godhamuun moodeelloonni 6 dargaggoota hojii dhabeeyyiif laatamaniiru.
Baasoonni 400 ammoo yeroo dhiyootti haala rabsa meeshalee socho’aaf ooluu danda’aniin suphamuun dargaggootaf kan rabsaman ta’uu ibsameera.
Baasiiwwan kunneen sadarkaa duraatti rabsa daabboof akka oolaniif qophaa’aa jiraachuu ragaan waajjira kaantibaa argame ni muul’isa.
Baasoota tajaajila geejjibaa dhaabaan suphuun hojii dhabdootaf iddoo hojii dabalata ta’uun akka tajaajilaniif ni hojjetama jedhan Injiinar Taakkalaa uumaan.
Warshaan oomisha daabboo shaggar yeroo ammaa dhibbeentaa 95 irra ga’ee jiran kan Injiinar Taakkalaan, Finfinnee fi naannawaa isheetti ijaarsi warshaa oomisha daabboo hammaan guddaa ta’e kan biroos ni eegalama jedhaniiru.
Finfinnee, Gootaraatti manneen ammayyaa ijaarramuufi